ကလေးအချင်းချင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူ;လွန်မှုဆိုတာ ရှိသလား? တကယ်ရော ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား? ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာ မိဘတွေနဲ့ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်တစ်ခုခု လုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းတွေပါပဲ။
စိတ်မကောင်းစရာလို့ပဲ ပြောရမလားတော့မသိ။ ကလေးသူငယ်လိင်ကျူးလွန်မှုအားလုံးရဲ့ ၃၀% ကျော်ကျော်လောက်မှာ တရားခံတွေက အသက်၁၈ နှစ်အောက် ကလေးတွေပဲ ဖြစ်နေတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေကဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုဟာ လက်မခံချင်လည်း လက်ခံရမဲ့ အလေးအနက်ထားပြီး ဖြေရှင်းရမဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အတိုကောက် COCSA ( Child On Child Sexual Abuse) လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းလိင်ကျူးလွန်မှုကို ယခုလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
” သဘောတူညီမှုမပါဘဲ ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အသက်အပိုင်းအခြားအရဖြစ်စေ တူညီမျှတမှုမရှိဘဲ ကလေးသူငယ်အချင်းချင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုကို ဆိုလိုပါသည်။”
အများအားဖြင့်တော့ အသက်ပိုကြီးတဲ့၊ ခွန်အားပိုကြီးတဲ့ကလေးတွေက အသက်ပိုငယ်တဲ့၊ ခွန်အားပိုနည်းတဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်မှာ ကျူးလွန်လေ့ရှိကြပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက လူကြီးတစ်ယောက်က ကျူးလွန်လို့ရတဲ့ဒဏ်ရာပမာဏမျိုး ရရှိနေလျှင်တောင် ဒီအမှုမျိူးဟာ စခန်းရောက် ဂါတ်ရောက်မဖြစ်တော့ဘဲ တိတ်တဆိတ်ပဲ ပြီးဆုံးသွားလေ့ရှိပါတယ်။ အကြောင်ရင်းတွေကတော့
– ကလေးအချင်းချင်း ဖြစ်တာပဲဆိုပြီး သိပ်အလေးအနက် မထားတတ်ကြတာရယ်၊
– အဖြစ်အပျက်ကို လူတွေသိသွားကြရင် ခံရတဲ့ကလေး (သို့မဟုတ်) ကျူးလွန်တဲ့ကလေး (သို့မဟုတ်) နှစ်ဖက်စလုံး နစ်နာထိခိုက်မှုရှိလာမှာကို ကြောက်ရွှံစိုးရိမ်လို့ ဖုံးကြကွယ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း လူကြီးတွေ သေချာမသိတဲ့အချက်က ဒီကိစ္စမျိုးဟာ ခံရတဲ့ကလေးသာမက ကျူးလွန်တဲ့ကလေးကိုပါ စောင့်ရှောက်ပြုပြင် ဖေးမဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပါ။
အကျူးလွန်ခံရတဲ့ကလေးအနေနဲ့ မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ စောင့်ရှောက်မှုမျိုး ရရှိဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျူးလွန်ခံရတာရဲ့ သက်ရောက်မှုဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုအနေနဲ့ အလွန်ကြီးမားပါတယ်။
ထို့အတူ ကျူးလွန်တဲ့ကလေးအဖို့လည်း သင့်တော်မှန်ကန်တဲ့စောင့်ရှောက်ပဲ့ပြင်မှုမျိုးပေးဖို့ အရေးကြီးသည်ဟု ဆိုလျှင် အံ့သြကောင်း အံသြသွားနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက် စာရင်းဇယားတွေအရ ယခုကဲ့သို့ ကျူးလွန်ဖူးတဲ့ကလေးဟာ နောင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်း ထပ်မံကျူးလွန်ဖို့ ဝန်မလေးတော့ကြလို့ပါ။ မုဒိမ်းတရားခံတွေနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်သူအများစုကို လေ့လာကြည့်လိုက်လျှင် ၎င်းတို့ဟာအသက် ၁၈ နှစ်အောက်အရွယ်ထဲက အလားတူကိစ္စမျိူးကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကလေးသူငယ်အချင်းချင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မသိမဖြစ် သိထားရမဲ့အချက် ၅ ချက် ကို ပြောပြပါမယ်။
၁။ အသက် ၁၂ နှစ် နဲ့ ၁၄ နှစ်ကြား အရွယ်ကလေးငယ်တွေဟာ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုလုပ်နိုင်ချေအရှိဆုံး အရွယ်တွေပါပဲ။
ဒီအရွယ်ဟာ ကြီးကောင်ဝင်စ အရွယ်ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲတွေ စဖြစ်ပေါ်ကာ အရာရာကို လက်တည့်စမ်းချင်နေတတ်တဲ့ အရွယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ထက် အသက်ငယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ကလေးတွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်တာမျိုး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကလေးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲ အတူတူရှိနေနိုင်သူတွေ အားလုံးကို သတိထားပါ။ လူကြီးတွေသာမက ကလေးတွေပါ သတိထားစောင့်ကြည့် လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်တတ်သူတွေရဲ့ ၇၀ % လောက်မှာ သားကောင် ၁ ယောက်ကနေ ၉ ယောက်အထိ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဆက်တိုက်ကျူးလွန်တတ်တဲ့သဘောပါ။
ဒါကြောင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဒီလိုလုပ်တတ်တဲ့ကလေးတယောက်ကို တားဆီးပြီး ပထမအကြိမ်ကျူးလွန်မှုအပြီးမှာတင် ပညာပေးဆုံးမမှုတွေပြုလုပ်လိုက်ရင် ဒီကလေး ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ နောက်ထပ်ကျူးလွန်လာနိုင်မဲ့အမှုအခင်းတွေကိုပါ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
၃။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုခံရတဲ့ကလေး ၄၀% လောက်ဟာ သူတို့ထက် ပိုအသက်ကြီးတဲ့ သူတို့ထက် ခွန်အားကြီးတဲ့ကလေးတွေရဲ့ ကျူးလွန်မှုကို ခံရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ကလေးသူငယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ကျူးလွန်မှုအများစုကို သူစိမ်းတယောက်ယောက်က ပြု လုပ်ဖို့ရာ အင်မတန် ခဲယဉ်းပါတယ်။
လူကြီးအမှုတွေမှာလိုပဲ ကလေးသူငယ်အချင်းချင်း လိင်ကျူးလွန်ဖို့ဆိုတာ ယခုမှတွေ့ဖူးတဲ့ သူစိမ်းတယောက်အနေနဲ့ ၊ မရင်းနှီးတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျူးလွန်ဖို့ရာ အလွန်ခဲယဉ်းပြီး ကလေးရဲ့သူငယ်ချင်း ဒါမှမဟုတ် မိသားစုဝင် ဒါမှမဟုတ် ဝင်ထွက်သွားလာနေကျ ရင်းနှီးသူတွေကသာ ကျူးလွန်လေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
၅။ ကျူးလွန်မှုခံရအပြီး တစ်လအတွင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာဆိုရင်တော့ နောက်နောင်ကြုံတွေ့ရမဲ့ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါးသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ့်ကလေးငယ်က ပြောလာခဲ့ပြီဆိုရင် သူတို့ကို ယုံပါ။ အလေးထားပြီး သေချာနားထောင်ပေးပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုတွေဟာ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာ ကောင်းလွန်းတာကြောင့် တွေးတောင်မကြည့်ချင်စရာဖြစ်သလို ဆွေးနွေးဖို့ရာလည်း မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။သင်ကိုယ်တိုင်သေချာနားလည်ထားမှ သင့်ကလေးငယ်ကိုလည်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ ပြောပြနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်လုပ်ဆောင်နေတာတွေ ပြောဆိုနားထောင်နေတာတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်ရင်သွေးငယ်ကို ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိူးကနေ ကာကွယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
OnDoctor App Ads